To: ग्यास र पेट्रोल पम्पमा लगानी गर्न भारत इच्छुक
काठमाडौं, वैशाख २६ - भारतीय आयल निगम (आइओसी) ले ग्यास रिफाइनेरी र पेट्रोल पम्पमा लगानी गर्न इच्छा देखाएको छ ।करिब डेढ महिना अघि आपूर्ति मन्त्रालय र आइओसीबीच भएको पाँच बर्षे इन्धन नवीकरण सम्झौताको क्रममा मन्त्रालयले लगानी गर्न प्रस्ताव गरेको थियो । यो खबर हामीले आजको कान्तिपुरबाट लिएका हौ।
कमल थापालाई तगारो
काठमाडौं, वैशाख २६ - मन्त्रिपरिषद्बाट हालै बाहिरिएको राप्रपाका लागि कांग्रेस र माओवादी केन्द्र गठबन्धन सरकारमा फेरि प्रवेशमा तगारो तेर्सिएको छ। सर्वोच्चको एकल इजलासको आदेशका कारण निलम्बित प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले नियमित कार्यभार समालेपछि महाभियोग विवाद सम्बोधन भएक...
'विप्लवका कार्यकर्ता भेट्नासाथ समात्नू'
काठमाडौं, वैशाख २६ - गृह मन्त्रालयले नेत्रविक्रम चन्द 'विप्लव' नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका कार्यकर्ताले निर्वाचन बिथोल्ने गतिविधि बढाएको भन्दै तिनलाई तत्काल पक्राउ गरी सार्वजनिक मुद्दा चलाउन सुरक्षा निकायलाई सर्कुलर गरेको छ। यो खबर आजको अन्नपूर्णमा शम्भु कट्टेलले लेखेका छन्। निर्वाचन बिथोल्ने उद्देश्यले उच्छृंखल र आपराधिक गतिविधि बढाएपछि गृह मन्त्रालयले विप्लवका कार्यकर्ता खोजी गरी पक्राउ गर्न सुरक्षा निकायलाई सर्कुलर गरेको हो ।
कसरी जुट्छ चुनाव खर्च
काठमाडौं, वैशाख २६ - स्थानीय तह निर्वाचनमा बजार निकै चलायमान हुन्छ। देशभरिका उम्मेदवारको कुल खर्च अर्बौं रुपैयाँ हुन्छ। प्रचारप्रसारका लागि उम्मेदवारले कार्यकर्ता परिचालन, मतदाता रिझाउने, इन्धन, सवारीसाधन, प्रचार सामग्री, कार्यालय सञ्चालनलगायतमा मोटो रकम खर्चिन्छन्। यो रकम उम्मेदवार आफैंसँग हुँदैन। उनीहरूको चुनावी खर्चको मुख्य स्रोत उद्योगी व्यवसायी हुने गरेका छन्। राजनीतिक दलले पनि केन्द्रीय स्तरबाट गर्ने चुनावी प्रचारको खर्च व्यवसायीबाटै उठाउँछन्। यो खबर नवीन अर्यालले आजको अन्नपूर्णमा लेखेका छन्।
सुविधाविना स्थानीय सरकार सम्हाल्दै जनप्रतिनिधि
काठमाडौं, वैशाख २५ - १९ वर्षपछि चुनिँदै गरेका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले सेवासुविधाविना नै स्थानीय सरकारको नेतृत्व गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। आगामी ३१ वैशाखमा पहिलो चरणको स्थानीय निर्वाचनपछि प्रदेश ३, ४ र ६ का २ सय ८३ वटा स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि चुनिने भए पनि कानुन अभावमा उनीहरूको सेवासुविधा तोकिएको छैन। यो खबर हामीले आजको राजधानी दैनिकबाट लिएका हौ।
प्रधानन्यायाधीश कार्कीले अदालत पुगेर आइतबार के गरिन्?
काठमाडौं, वैशाख २५ - महाभियोग प्रस्ताव यथास्थितिमा राख्न र प्रधानन्यायाधीशलाई काममा फर्काउन सर्वोच्चले दिएको आदेशअनुसार आइतबार सुशीला कार्की सर्वोच्च अदालतमा फर्किइन् । तर, उनले आफ्नो लागि कुनै इजलास तोकिनन् । यो खबर हामीले आजको नयाँ पत्रिकाबाट लिएका हौ।
बहिनीलाई सघाउन भारतबाट विपना थापा
काठमाडौं, वैशाख २५ - उनका हजुरबुबा २०१५ को आम निर्वाचनमा काठकाडौंका सांसद भएका थिए । बुबा ओमविक्रम थापा पञ्चायत कालमा पटक पटक प्रधानपन्च भए । यस पटक ३६ बर्षीय बहिनी वासना थापा दैलेखको नारायण नगरपालिकामा उपमेयर उठेकी छन् । विपनाले बहिनीको लागि भोट माग्ने बताइन् ।
डेरीलाई दूध अभाव, भारतकै भर
काठमाडौं, वैशाख २५ - दूग्ध प्रशोधन उद्योग (डेरी)लाई कच्चा दूध अभाव भएको छ । निजी क्षेत्रका उद्योग र सरकारी स्वामित्वको दुग्ध विकास संस्थान (डीडीसी) ले दूध प्रशोधन गरी बजारमा बिक्री गर्दै आएका छन् । स्वदेशी दूध मागअनुसार उपलब्ध नभएपछि उद्योगले भारतबाट दूध आयात गरिरहेका छन् । यो खबर राजेश बर्माले आजको अन्नपूर्णमा लेखेका छन्।
उपेक्षामा बजेटः जेठ १५ को समयसीमा के होला?
काठमाडौं, वैशाख २५ - संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार १५ जेठमा सरकारले बजेट ल्याउनुपर्ने हुन्छ । निर्वाचन आयोगले दुई चरणका निर्वाचनको बीचमा बजेट ल्याउन आचारसंहिताले नदिने बताएको छ । प्रतिपक्षी एमालेले पनि बजेटपछि हुने निर्वाचन स्वीकार नहुने स्पष्ट पारेको छ । तर, यो जटिलताबारे प्रमुख दलहरुबीच गम्भीर छलफल नै भएको छैन । यो खबर हामीले आजको नयाँ पत्रिकाबाट लिएका हौ।
निर्वाचन सुरक्षामा अनुमति नलिइ गोली चलाउन सक्ने अधिकार
काठमाडौं, वैशाख २५ - आगामी आइतबार हुने पहिलो चरणको स्थानीय तह निर्वाचनको प्रत्येक मतदान केन्द्रको सुरक्षामा सानो हतियार (पेस्तोल) सहित प्रहरी निरीक्षकको कमाण्डमा कम्तीमा २८ प्रहरी खटिने भएका छन्। यो खबर हामीले आजको नागरिक दैनिकबाट लिएका हौ।
जुम्लाका युवालाई चुनाव भन्दा यार्साकै चिन्ता, मतदान छाडेर यार्सा टिप्न पाटनतिर
गाउँमा निर्वाचनका लागि प्रचारप्रसार कार्य तीव्र भइरहेका बेला जुम्ला छुमचौरका युवा भने बहुमूल्य जडिबुटी यार्सागुम्बा टिप्न पाटनतिर लागेका छन् । यार्सा टिप्ने सिजन सुरु भएकाले युवा स्थानीय तहको निर्वाचनमा मतदान नगरी कमाउन त्यसतर्फ लागेका हुन् । यो खबर हामीले आजको अन्नपूर्णबाट लिएका हौ।
काठमाडौं, वैशाख २५ - दुई वर्षभित्र काठमाडौंमा मेट्रो रेलको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनसम्म पनि तयार पार्न सकिँदैन। तर महानगर मेयरका एमाले उम्मेदवार विद्यासुन्दर शाक्यले दुई वर्षमा मेट्रो र तीन वर्षमा मोनो रेल कुदाउने घोषणा गर्नुभएको छ। हचुवाकै भरमा रेल कुदाउने सपना बाँडेपछि नागरिक र विज्ञले व्यंग्य गरिरहेका छन्। वातावरणविद् भूषण तुलाधरले ट्विटरमा तीन वर्षभित्र विस्तृत योजना पनि तयार नहुने बताउँदै वाहियात सपना नबाँड्न सुझाव दिएका छन्। यो खबर हामीले आजको अन्नपूर्णबाट लिएका हौ। जसलाई नवीन अर्यालले लेखेका छन्।
प्रधानन्यायाधीशमाथि महाभियोग प्रकरण:समाधान टाढै, विवरण गोप्य राखिए
काठमाडौं, वैशाख २५ - प्रधानन्यायाधीशको महाभियोगलाई लिएर संसद् र न्यायपालिकाबीचको उग्र द्वन्द्व नियन्त्रण गर्ने प्रयासमा सर्वोच्च अदालत, प्रधानमन्त्रीनिवास र शीतलनिवास लागिपरे पनि ध्रुवीकृत राजनीतिका विभिन्न पक्षहरूले आफ्नो रणनीति भने गोप्य नै राखेका छन्। यो खबर चिरञ्जीवी ढुंगाना र रेवती सापकोटाले आजको अन्नपूर्णमा लेखेका छन्।
शौचालयको दुरवस्था: ‘अस्पताल गएका सद्दे पनि बिरामी हुन्छन्’
काठमाडौं, वैशाख २५ - उपचार गर्नुभन्दा रोग लाग्न नदिनु राम्रो र त्यसका लागि सरसफाइमा विशेष ध्यान दिन सुझाव दिने गरिन्छ। त्यस्तो सन्देश चिकित्सकको सल्लाहअनुसार नै आउने गर्दछ तर तिनै चिकित्सकको कार्यकक्षका शौचालय देख्दा सद्दे मान्छे नै बिरामी हुने अवस्था छ। यो खबर सरोज ढुङ्गेलले आजको गोरखापत्रमा लेखेका छन्।
साउथ एसिया स्याटेलाइट प्रक्षेपण, नेपाललाई पनि सुविधा
काठमाडौं, वैशाख २४ - भारतले शुक्रबार प्रक्षेपण गरेको साउथ एसिया स्याटेलाइछ(भू–उपग्रह) मा नेपाल सहित छिमेकी राष्ट्रहरुलाई विशेष सुविधा दिने घोषणा गरेको छ । यो खबर हामीले आजको नागरिक दैनिकबाट लिएका हौ।
अदालतको आदेशपछि कांग्रेस के गर्छ?
काठमाडौं, वैशाख २४ - प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध महाअभियोगबारे सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि मध्यमार्गी बाटोबाट समाधान निकाल्ने पक्षमा कांग्रेस पुगेको छ । निर्वाचनको मुखमा टसल बढाउँदा थप अन्योलता बढ्ने भन्दै बीचको बाटोबाट समाधान निकाल्ने प्रयास भइरहेको नेता रामचन्द्र पौडेलले बताए ।
सरकारको नेतृत्व जेठ पहिलो साता परिवर्तन हुँदै, अब देउवा प्रधानमन्त्री
काठमाडौं, वैशाख २४ - प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले जेठ पहिलो साता शेरबहादुर देउवालाई सत्ता हस्तान्तरण गर्ने भएका छन्। आलोपालो सरकारको नेतृत्व लिने दुई दलबीचको भद्र सहमति कार्यान्वयन गर्दै प्रचण्डले सत्ता हस्तान्तरण गर्ने माओवादीका वरिष्ठ नेताहरुले बताएका छन्। यो खबर हामीले आजको नयाँ पत्रिकाबाट लिएका हौ।
शून्य दरबन्दीमा कालिकोटका ९९ सरकारी विद्यालय
काठमाडौ, वैशाख २४ - ती विद्यालयमा अब छिटै दरबन्दी दिने कुरा भएको, तर संघीयताका कुराले फेरि अन्योल भएको उनको भनाइ छ । शून्य दरबन्दी भए पनि निजी स्रोतबाट राम्रो प्रयास भएको तिवारीको भनाइ छ । सरकारले आधारभूत शिक्षालाई अनिवार्य र निःशुल्क बनाए पनि शिक्षक दरबन्दी नहुँदा सरकारकै नीतिमा चुनौती थपिएको छ । कालिकोटमा अहिले दुई सय ९४ सामुदायिक र १२ वटा संस्थागत विद्यालय सञ्चालनमा रहेका छन् ।
काठमाडौं, वैशाख २४ - प्रधानन्याधीश सुशीला कार्कीलाई यथास्थितमा राख्न सर्वोच्च अदालतले दिएको फैसलापछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र सभामुख ओनसरी घर्तीले विभिन्न पाँच विकल्पमा छलफल गरेका छन् । विभिन्न विकल्पमा छलफल गरे पनि के गर्ने भन्नेमा सरकार अन्यौलमा छ । यो खबर आजको नागरिक दैनिकमा भुवन शर्माले लेखेका छन्।
मधेसी मोर्चासँग राष्ट्रपतिको ठट्यौली
काठमाडौं, वैशाख २४ - राष्ट्रपतिले मोर्चाका नेताहरूलाई पकौडा खुवाएर सत्कार गरेकी थिइन्। नेताहरूले पकौडा खाँदै गर्दा राष्ट्रपतिले सोधिन्, 'पकौडा त मिठै होला? ' नेताहरूले जबाफ दिए, 'हजुरको सम्धी (पूर्वराष्ट्रपति डा. रामवरण यादव) ले त मिठाइ, दही र चिउरा खुवाउनुहुन्थ्यो ।' लग...
काठमाडौं, वैशाख २४ - सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाको एकल इजलासले महाभियोग लागेकी प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई यथास्थितिमा काममा फर्कन आदेश दिएपछि सरकार आक्रोशित भए पनि तत्काल केही नगर्ने रणनीति अपनाएको छ। यो खबर रेवती सापकोटा/नरेन्द्र साउदले आजको अन्नपूर्णमा लेखेका छन्।
काठमाडौं, वैशाख २४ - मधेसी मोर्चाका नेताले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई संविधानको अभिभावकको भूमिका निर्वाह गर्न र परिआएमा कठोर कदमसमेत उठाउन सुझाव दिएका छन्।न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाको भिडन्तकै क्रममा राष्ट्रपति र सभामुखसमेत ठूला दलको महाभियोगको निशानामा पर्न लागेको...
अब सवारी दर्ता प्रदेशमा, लाइसेन्स स्थानीय तहबाट
काठमाडौं, वैशाख २४ - संघीयता कार्यान्वयनमा आएसँगै सवारी साधन दर्ता प्रदेश सरकारले गर्ने भएको छ। हाल सवारी साधन दर्ता अञ्चल यातायात कार्यालयहरूले गर्दै आएका छन्। यो खबर आजको कारोबार दैनिकमा शिव बोहराले लेखेका छन्।
संघीय गठबन्धनमा किचलो
काठमाडौं, वैशाख २४ - संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चासहितको संघीय गठबन्धनले संघीय समाजवादी फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई गठबन्धनको संयोजकबाट बर्खास्त गरेको छ । राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालको बिजुलीबजारस्थित कार्यालयमा शनिबार बसेको गठबन्धनको बैठकले यादवलाई पदबाट हटाई कारबाही गरिएको जनाएको छ । यो खबर आजको राजधानी दैनिकमा सुभाष साहले लेखेका छन्।
काठमाडौं, वैशाख २३ - निलम्बित प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई काममा फर्कन र संसद्मा महाभियोग प्रस्ताव अगाडि नबढाउन सर्वोच्च अदालतले दिएको अन्तरिम आदेश शुक्रबार साँझ संसद्मा पुगेको छ। सभामुख ओनसरी घर्तीले सर्वोच्चको आदेशबारे कुनै टिप्पणी गरेकी छैनन् । उनले अहिले आन्तरिक रुपमा परामर्श थालेकी छन् । यो खबर हामीले आजको नयाँ पत्रिकाबाट लिएका हौ।
'कारबाही प्रस्ताव गरिएकाबाटै कार्कीलाई न्याय'
काठमाडौं, वैशाख २३ - पूर्वमन्त्री जयप्रकाशप्रसाद गुप्ताविरुद्धको भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतबाट फैसला गर्दा विशेषका तत्कालीन न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले संविधान र कानुनको दायराबाहिर गई जबर्जस्त सफाइ दिलाएको भन्दै चार वर्षअघि सर्वोच्चमा न्यायाधीश रहेकी कार्कीले अन्तिम फैसला सुनाउने क्रममा राणामाथि छानबिन र कारबाहीका लागि न्यायपरिषद्को ध्यानाकर्षण गरेका थिए।
काठमाडौं, वैशाख २३ - स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख र वडाध्यक्षले मासिक तलब पाउने भएका छन्। संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले तयार गरेको स्थानीय तहका पदाधिकारीको सेवा सविधासम्बन्धी ऐनको मस्यौदामा मासिक तलबको व्यवस्था गरिएको छ। यो खबर हामीले आजको नयाँ पत्रिकाबाट लिएका हौ।
निर्वाचनमा सुरक्षा चुनौती दिन सक्ने १ सय ३१ ‘गुन्डा’ निगरानीमा
काठमाडौं, वैशाख २३ - स्थानीय तहको निर्वाचनमा सुरक्षा चुनौती दिन सक्ने एक सय ३१ ‘गुन्डा’हरूको सूची बनाएर प्रहरीले उनीहरूमाथि निगरानी सुरु गरेको छ। महानगरीय प्रहरी कार्यालयले उपत्यकाका तीनै जिल्लामा गुन्डागर्दीमा संलग्नहरूको सूची नै पठाएर निगरानीमा राख्न निर्देशन दिएको हो। यो खबर नवराज मैनालीले आजको नयाँ पत्रिकामा लेखेका छन्।
चालक अनुमतिपत्र जेठ ७ पछि
ललितपुर, वैशाख २३ - आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचनका कारण वाग्मती अञ्चल यातायात कार्यालयले सवारी चालक अनुमतिपत्रसम्बन्धी सेवा आगामी जेठ ७ गतेसम्मका लागि बन्द गरेको छ । यो खबर हामीले आजको गोरखापत्रबाट लिएका हौ।
सामाजिक सञ्जालमा लागेको ‘चुनाव’
काठमाडौं, वैशाख २३ - स्थानीय तहको निर्वाचनले यति बेला समाजको सबै तह र तप्कासँगै सामाजिक सञ्जाल पनि निर्वाचन सामग्रीले रङ्गिएका छन् । राजनीतिक दल, नेता, कार्यकर्ता र उम्मेदवारसमेत सामाजिक सञ्जालमार्फत चुनावमा होमिएका छन् । यो खबर अजय शर्माले आजको गोरखापत्रमा लेखेका छन्।